Njem ihe nkiri asaa dị na Kildare - IntoKildare
Ezinụlọ, di na nwunye, Na mmefu ego, Ihe Zoro Ezo, N'èzí, ndị na-anụ ọkụ n'obi, Ihe Ime
Ọ bụrụ na ị na -achọ ikpochapụ ọnya ọnya wee banye ikuku ọhụrụ na ngwụsị izu a, gịnị ma ị kaa ụfọdụ n'ime Kildare ndị a dị egwu pụọ na ndepụta gị!
Mee ka obi gị dị elu mgbe ị na -enyocha ihe dị n'ọnụ ụzọ gị! Kildare mara mma nwere ụfọdụ ụzọ dị egwu na mba ahụ, yana ihe mgbe ochie na saịtị mgbe ochie juputara na mpaghara ahụ, yana ije asaa ndị a ị gaghị arapara maka ọrụ izu ụka!
Mbipụta nke Toni Haberland Photography (@tonihaberlandphotography) kesara
Naanị ụgbọ ala nkeji ise site na Rathangan Village bụ ọmarịcha mara mma na nke achọpụtabeghị Osisi Killinthomas. Jupụta na bluebells na mmiri na na ala oroma nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ n'oge mgbụsị akwụkwọ, e nwere nhọrọ maka ma mkpụmkpụ na ogologo ije, ihe niile na-amalite ma na-agwụ na carpark.
Enwere akara ntụpọ dị n'akụkụ ụzọ niile, na -eme ka ije a 10km dị mfe ịnyagharịa maka ndị ọbịa. Ndị na -eje ije nwere ike ịnụ ụtọ ihe ọkụkụ dị iche iche nke osisi, yana ụdị osisi na ahịhịa dị iche iche.
Mbipụta nke Rob Walshe (@the_irish_dogfather) kesara
Chọpụta ọmarịcha n'èzí na meander gburugburu ogige ntụrụndụ na-adọrọ adọrọ nke Letlọ Castletown! Na-emepe emepe kwa afọ, ogige ntụrụndụ na-anya n'ụzọ dị egwu na njem osimiri, ma nweere onwe ya ịbanye.
N'akụkọ ihe mere eme, ogige ahụ nwere ọtụtụ ahịhịa na ụmụ anụmanụ, yabụ na -ekiri anya na osisi, osimiri na ọdọ mmiri!
Maka mkpagharị mkpagharị ehihie dị mkpirikpi, soro Lake Walk, nke na-agbagharị gburugburu ọdọ mmiri juru na-ewe ihe na-erughị ọkara awa. Trazọ Nature dị n'okpuru 2km, nke na -agafe ụfọdụ ihe owuwu ụlọ ahụ. Maka ndị na -eje ije nwere oke agụụ, Aylmer Walk bụ ụzọ 6km Slí na Slainte nke na -eweta ndị na -ejegharị gburugburu ogige ahụ.
Mbipụta nke 𝑱𝒂𝒔𝒏𝒂 𝑴𝒂𝒅𝒛𝒂𝒓𝒊𝒄 (@mrsjasnamadzaric) kesara
Nwee mkpagharị izu ụka n'akụkụ mmiri nke otu n'ime osimiri akụkọ ihe mere eme nke Ireland, Osimiri Barrow. N'inwe ihe na-akpali mmasị na ntụgharị ọ bụla na ntanye a dị afọ 200, osimiri a bụ ezigbo enyi maka onye ọ bụla na-eje ije ma ọ bụ na-agba ịnyịnya. Rowzọ Barrow.
Kpoo osisi na osisi ndị dị n'akụkụ mmiri ya, mkpọchi mara mma na ụlọ ochie na-echekwa mkpọchi.
An ntuziaka ọdịyo dị na ihe karịrị awa abụọ kwesịrị ige ntị, juputara na akụkọ na ozi gbasara ndị eze oge ochie nke Leinster, nku anya ekwensu, obere katidral St Laserian na ndị ọzọ.
Biputere ColletteMichelle (@scorpiocollette) kesara
Ụzọ yiri nke ahụ na ụzọ Barrow, linear a mara mma na-eje ije dị mma maka ndị chọrọ ijide kọfị ma na-aga n'ihu. Ije ije dịka masịrị gị, ị nwere ike ịwụpụ n'ụgbọ njem ọha n'ụzọ dị mfe iji kpọghachi gị n'ebe mmalite gị.
Enwere ọtụtụ ihe atụ dị ịrịba ama nke ngwụcha narị afọ nke iri na asatọ ụlọ ọrụ nkà mmụta ihe ochie iji nwee mmasị n'okporo ụzọ, gụnyere Ryewater Aquaduct nke na-eburu ọwa mmiri dị n'elu osimiri Rye, nke were afọ isii iji wuo ya.
Nke biputere Daniel Craig (@im_daniel_craig)
Na-enwe mmasị na akwụkwọ mara mma na njem Sunday dị mfe ikuku na-aga Athy Slí. Malite n'ụlọ ikpe (wuru na 1857) n'akụkụ Osimiri Barrow, njem a 2.5km na-aga n'akụkụ osimiri, na-aga n'okporo ụzọ Barrow, na-agafe St Michael's Church of Ireland, n'okpuru Horse Bridge na Railway Bridge, na n'akụkụ Ụzọ Ọwara Mmiri.
Enwere ike ịga ije okirikiri a n'akụkụ ọ bụla ma ọ dị mma maka ịga ije ndị enyi na-ewe iwe ọkụ, na-akwagharị ụmụaka ịnya ụgbọ ala, ma ọ bụ naanị ịpụ na nkeji iri atọ iji nụ ụtọ anwụ anwụ nke ọnwa Febụwarị.
Okporo ụzọ St Brigid
Mbipụta nke Regina (@reginaoftheland) kesara
Nestled na Ancient East nke Ireland bụ St Brigid's Trail, isi Iso Ụzọ Kraịst sitere na Ireland.
Akụkọ dị ịrịba ama nke St Brigid, onye nsọ nwanyị nwanyị hụrụ n'anya nke Ireland, na oge ya na Kildare na-apụta ìhè na St Brigid's Trail ka ị na-ewere ụfọdụ akara ama ama ama Kildare Town.
The ụzọ malitere na Kildare Heritage Center na Market Square ebe ndị ọbịa nwere ike ikiri ihe ngosi ọdịyo na St Brigid. Ụzọ ahụ ga-eduga gị na njem site na St Brigid's Cathedral, St Brigid Church na n'ezie Solas Bhríde Center nke a raara nye ihe nketa mmụọ nke St Brigid na mkpa ya maka oge anyị. Ebe ikpeazụ na njem ahụ bụ olulu mmiri St Brigid ochie na Tully Road, ebe ndị ọbịa nwere ike ịnọpụ oge awa udo.
Ezinụlọdi na nwunyeNa mmefu egoIhe Zoro EzoN'èzí, ndị na-anụ ọkụ n'obiIhe Ime